Drafitra malalaka Adobe XD hamolavolana fampiharana efa misy | Famoronana an-tserasera
Misy fitaovana izay very vidiny isika hahafahanao mahazo ireo toetra matihanina izay afaka manavaka ny asantsika amin'ny hafa. Saingy miova izany ka izao Adobe manolotra ny drafitra Adobe XD maimaim-poana, fitaovana iray hamoronana fampiharana izay mamaritra tsara ny fotoana finday sy ireo finday finday izay tavela tamin'ny fiainantsika mandrakizay.
Androany no nanambaran'ny Adobe fa manolotra ny mpampiasa kinova amin'ny sehatra misy azy famolavolana interface tsara maimaim-poana. Izany dia amin'ny alàlan'ny drafitra Adobe XD Starter maimaim-poana. Azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa Windows sy Mac izy io. Mandritra izany fotoana izany dia nanambara i Adobe fa manome $ 10 tapitrisa ho an'ny mpamorona izy ireo hanampiana azy ireo hamorona plugins ho an'ny fitaovana famolavolana.
Ary ny hevitra dia tamin'io andro io ihany dia namoaka ny Adobe na ny vaovao sasany aza avy amin'ny XD, ao anatin'izany ny fampidirana tsara kokoa amin'ny Sketch sy Adobe Photoshop. Adobe XD dia manolotra ny tenany ho fifaninanana amin'ny Sketch tenany, izay toa manana toerana tsara kokoa eo amin'ny tsena.
Momba ny drafitra Adobe XD Starter ho hitanao fitaovana prototyping rehetra izay hita amin'ny kinova feno. Ny zavatra tokana dia, ny mpampiasa dia tsy hanana afa-mizara andiana famaritana famolavolana tokana.
Ka mety ho kileman-toetra io rehefa mitady Adobe XD ho an'ny fikambanana na ekipa. Na izany na tsy izany, ny manomboka ao amin'ny Adobe XD no fomba tsara indrindra anaovana an'izany ary izany no antony anomezan'ny orinasa fampianarana, torohevitra ary fitaovana hanombohana amin'ny iray amin'ireo sehatry ny famolavolana izay manitatra indrindra.
eto manana ny rohy ianao handeha ipto facto mankany Drafitra Adobe XD Starter ary manomboka miasa miaraka amin'ity fitaovana ity; aza adino ity andiana loharano ity avy amin'ny Adobe mihitsy for free.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe dia mandefa ny drafitra Adobe XD maimaim-poana mba hanananao ny fitaovana famolavolana tsara indrindra